Faah Faahin: Al Shabaab Oo Sheegatay Weerar Lagu Dilay Askar iyo Mas'uuliyiin Kenyaan Ah oo Ka Dhacay Gobolka Lamu.
Saturday July 15, 2017 - 09:01:43 in Wararka by Super Admin
War rasmi ah oo kasoo baxay Xarakada Al Shabaab ayay ku sheegatay mas'uuliyadda weerar khasaara badan dhaliyay oo khamiistii lasoo dhaafay ka dhacay gobolka Lamu ee gudaha dalka Kenya.
SAWIR: Waa goobta uu ka dhacay weerarkii Khamiis, 13 July, 2017.
"Ciidamo aad u hubeysan oo ka tirsan Mujaahidiinta ayaa weerar Kamiin ah u dhigay Kolonyo ka tirsan ciidamada Kufaarta Kenya oo ku socdaalayey wadada Hal-bowlaha ah ee isku xirta magaalooyinka Lamu iyo Mpeketoni ee gudaha Kenya sida ay noo xaqiijiyeen Saraakiil ka tirsan mujaahidiinta" ayaa lagu yiri war lagu faafiyay website-ka idaacadda Andalus.
Kolonyada la weeraray ayaa ka koobneyd saddex gaari, waxayna la kulmeen weerar dhabagal ah oo ay diyaareen Al Shabaab Wararku waxay sheegayaan in gabi ahaanba halkaas lagu baabi’iyey kolonyada, Wixii saarnaana ay noqdeen wax la dilay iyo wax firxaday.
Sarkaal ka tirsan Xarakada SHM ayaa Idaacadda Andalus u sheegay in weerarka lagu dilay ugu yaraan 5 askari, Sidoo kalena lagu burburiyey hal gaari.
Sarkaalkan ayaa sidoo kale noo sheegay in ciidamadoodu ay gacanta ku dhigeen laba gaari oo ka mid ahaa Kolonyada, kuwaas oo dagaalyahanadu ay soo kaxeysteen, lana yimaadeen goobo aamin ah.
"Mujaahidiinta ayaa sheegay in uusan jirin wax iska caabi ah oo ay kala kulmeen ciidamada Kenya ama gurmad soo gaaray goobta intii uu howlgalku socday, Iyagoona meesha ka saaray sheegashooyinka gaalada Kenya ee tilmaamayey in laga hortagay weerarka, Islamarkaana uusan geysan wax qasaare ah" ayaa lasii raaciyay warka kasoo baxay Al Shabaab.
Weerarkan ayaa qeyb ka ah silsilado weeraro ah oo Xoogaga Al Shabaab ay ka wadaan deegaanada dhaca xeebaha Kenya ee ay leeyihiin Muslimiinta balse ku hoosjira gumeysiga Kenya.